Gabayo Qubana Ah - BAARGAAL.NET
Gabayo Qubana Ah
✔ Admin on April 25, 2009 0 Comment
Gabnadaan abiidkeed aqoon gobo'da caanoodba
Gashigeedu waa belo haddii laysu gaatamo'e
Qur goÃ¢â‚¬â„¢aysa oo dixrigu qulqulin qurboow adigaa leh
Mayd la qaadi oo sanduukh lagu qufuli qurboow adigaa leh
Dumar qoodayn oo ragu ubadka qaban qurboow adigaa leh
Hebel aan qaabilee adigu qadada kari qurboow adigaa leh
Talada qaado yaadan qaxine qurboow adigaa leh
Afkaba ma qorine suuqa qaban ogaa qurboow adigaa leh
Xijaab bay qabtaye yaa qaadka baray qurboow adigaa leh
Qolo aan gudnayn oo dumarkeena qaba qurboow adigaa leh
Budiste goÃ¢â‚¬â„¢ qaba oon aan qaraabo nahay qurboow adigaa leh
Ilmo qabiran oon layr qaadan karin qurboow adigaa leh
Dhalaan qaylin oo aan caleen soo qaban karayn qurboow adigaa leh
Ciyaal tacliin qaata oon laylis qori karayn qurboow adigaa leh
Waa boyfriend qumane faraha iiga qaad qurboow adigaa leh
Dhalaan qariban oon qolo umaqnayn qurboow adigaa leh
Duul kuu qoyslaaya oo feylaha ku qalan qurboow adigaa leh
Qaxan oogan oo qaboow la bidin qurboow adigaa leh
Dabin qoolan oo qoobabka la suran qurboow adigaa leh
Qabqable yimid oo qoomku ushirin qurboow adigaa leh
Qado la siiyo oo qadarin loogu daro qurboow adigaa leh.
Gabay: Dacwad baan ka leeyahay
Heshiiskii Iligdaldala markuu dhacay ka dib ayaa gumaysiga. Ingiriisku warqad u soo diray Daraawiish,wuxuuna ku yidhi: Mar haddii waanwaan iyo heshiis nabadeed ina dhex maray taliska Ingiriisku Daraawiish wuxuu weydiisanayaa sadex Hal
Midda Koow geeli Daboolane ee Daraawiish degmada Habaryonis ka dhacday inaad waxuun ka soo celisaan!
Tan labaad nimanka dabatada ah,oo Nugaal sare fadhiya oo dad iyo duunyaba mahoobbiyey,col iyo gaadeba inaad naga celisaan
Daraawiish markii hadalkaas loo keenay waxba kama gilgilan danina waa seeto, waxay yiraahdeen, 1)Midda hore xoolihii daraawiish lagaga dhacay meesha la yiraa caado dabadeedna Burco la keenay noo celiya 2) Midda labaadna doonidii aaannu dabka u dirsannay Ciise dhoollawaana rubbaanka u ahaa oo aad baddaas ka qafaalateen,iyadii iyo wixii saarnaaba noo celiya oo aan sidaa wax isku weydaarsanno. Doodaas darawiish Ingiriisku waa ku gacan sayray,wuxuuna marmarsiinyo ka dhigtey "xoolihii Caado laga dhacay Ogaadeen baa dhacay,Ogaadeena amxaaro buu la jooga, Doonnidana talyaani baa qafaashay,talyaani qareen uma aha Laba doodood ee Ingiriis soo jeediyey Daraawiish ma garowsan .Sayidkuna masafo dheer oo uu ku caddaynayo inuu Ingiriisku musuqmaasuq wado buu mariyey ,waana tan
Ogaadeen ha ii dirin.dacwad baan ka leeyahay
Duul haad Amxaaraa,kaa dooni maayee
Wuxuu aniga iga dilay,diyo hayga siinnine.
Doofaar inuu yahay, anigaa u diin lehe
Amba waa ku daba geli, dakanka iyo qaankee
Dirhan haddii aan kaga tago, anaa been dabaadehe
Waxaan kaa dalbahayaa,duunkaagu wuxuu qabo
Intaad dawladduu tahay, adigaw damiinshe
Ma waad diidi nimankaad,dumataye i soo dhacay
May dowga caadood,galbeed uga dareershaan
Dalkaad adigu joogtiyo,Burca maxay ka dooneen
Dar alliyo heshiis iyo,ma daawaad lahaydeen
Mase waa dayoobeen,doqon baa habowdee?
Dabadeedna sow maalkii,dacalkaaga kuma shuban?
Sow daabacaagiyo,daftarkaaga kuma qiran?
Sow duhur dharaareed,dibnahaaga kama qiran?
Sow sida dameer raran,dusha kaama fuushaana?
Miyaan duudsiyaayaa,kulaan Dabacayuun helo?
Haddaad daacad ii tahay,doodaye maxaad oran?.
Dafir miyuu wax kuu tari daliilkii ku siiyaye?
Doonnidii ma aan arag, dacwad baan ka leeyahay
War maxaad durduradiyo,dan la'aanta ugu dhiman?
Hadal aan dawo lahayn,sow kama diqootaan?
Dakhalkiyo shiraaciyo,badda yaa u dowlada?
Talyan waa dadkaagiyo,daayiciin aad wadataa
Haddii aanad duqlaalayn Dannood sooma aadeen
Diraac doollo iyo ciid,duullan kuma yimaadeen
Diigaanyo ciidana,darka nooma keeneen
Dildillaaca waaberi,weerar naguma daacsheen
Durqun nama dhex joogine,adaa hiil ka daalibay
Adigaa durraamiyo,docogaysi ula tegey
Adaa yiri Daraawiish,dirirteeda ii raac
Asna diradirayntaada,iga deyso kuma odhan
Intaad dacatiyaysana,sow kulama daalayn?
Sow dab iyo xooliyo,daabbad kuguma caawinin
Sow daraaddii kuma imaan,Hobyo wixii ka soo degey?
Sow duubcaddaydii,raggii dooxay ma ahayn?
War nin shalay damiinyahow,igu dilay daraaddaa
Berri haddaydnu dirirrana,dusha iga wareentayn
Daawadayda maahayn,ma ku dayrsamaayaa?
Durruflayda gaalaad,adaa daaqsanaayee
Miyaan kala deyaayaa,adiga iyo deriskaa
Warsengeli doc uga bayr,dacwad baan ka leeyahay
Mar hadday ku doortaan,isku diirad miihine
Dabcigaygu ma oggola,nin kuu daalasayee
Daraawiish hadduu yahay,sidee doc uga leexdaa?
War daarood ismaaciil,dir miyaad wadaagtaan?
Durriyadii adoogay,miyaad iigu duurxuli?
Sow deero iyo cawl,doraad adigu kama dhigin?
Sow dukaamadoodii,daarahaaga kuma guran?
Sow doonyahoodii,dookhaan naara kuma ridin?
Sow dooro weynow,ma deldelin raggoodii?
Inay kuu dudaayaan,sow maba dareensanid?
Inaad dooc lillaynayn,diyaar kuu ogaaddee
Dikrigiyo shareecada,labadaad ka duudiye
Durdurkii firdowsiyo,jannadaad ka daahiye
Darbaddii cadaabkiyo,dukhaankii baad ku tuuriye
War inaad dagaysana,sow dareemi maayaan?
Ma ku diirsanaayaan,deelqaafkan aad tiri?
Dumarkii ma furayaan,xilihii dalaaqee?
Geela soo dareerina,dacwad baan ka leeyahay
Anigaba dunqaariyo,dacataa i gaaraye
Dibirrootigaaga,lawyada i diiraye
Qayradii daruurrayd,adaa damug ka siiyaye
Dulbixii Gallaadiyo,dudmaa ii horreysaye
Daa'imaan wax garannine,digniin iim laabnee
Dabarka ciise lagu xiray,anaa laygu dooniye
Degdeg haddaan looga furin,dunidaa ifsaadiye
Dantay baan la yeeraye,yaan laygu diimine
Deeqi igama juustee,wax ma kala dillaalaa?
Dabatada aad sheegtana, dacwad baan ka leeyahay
Oo wixii inoo dana,durba maysu yeellaa?
Mase ways daboolnaa,nin dulmiyan allaa oge?
Adigaa dulleeyoo,duunyada ka qadoo
Adaa degalladoodii,digaxaarka mariyoo
Diinkiyo dugaaggiyo,adaa duufka siiyee
Intaasoo darxumadaa,adigaa u diiqaye
Hadday daqaqamaanoo,wuxuun kaa danqaabaan
Oo waxaan dux gelinayn, duleeddada ka xaabaan
Iyagaba dan gaajiyo,diihaal baa u geeyaye
Anna haygu diga gubin,adiguna dan haw gelin
Dayib haddaadan oranayn,dabuubtaan ku leeyahay
Oo doxorayaashii,been kugu dakhaakhuli
Bal inaan dugsuu ahay, amaan idin ku soo diray
Hadii aadan danbaabayn,daahir marag ah soo taag
Niman badan oo Warsangeli ah Maxamud cali shire na madax. u yahay ayaa Sayidka maxamed xoolo fara badan siiyey oo geel fardo iyo ariba leh, dabadeedna is-afgaranwaa ayaa ka dhex dhacay,waana kala boodeen,dareenna waaba kala galay!" Dabadeedna degmadii xaruntii ka guureen oo waxay tageen buura Calmadoow,Daraawiishna,qabuulse lagama helin. Daraawiish waxay guddoonsatay hadday ka tashadeen inay dadkii iyo duunyadey la tageen ka soo ceshadaan waxase isku gudbey oo fardihii u mari waayeen buurihii Caleed iyo togag aan laga tallaabi karin.Daraawiishi waxay qabeen geela iyo fardaha ninna in aanu yeelan karin ee ay rag oo dhan ka dhaxeeyaan, hase yeeshee xilligii guga markay ahayd oo degmadii soo feddabaxday ayaa Daraawiishii geelii gacanta ku dhigtay, dabadeedna ku digasho darteed ayaa Sayid Maxamed gabay gaaban u mariyey waxuu yidhi:-
Bogadaawad waataan lahaa,bari ka soo dhiibe
Waataan bidhaan quruxsaney,soo bojooy iriye
Waataan baadi celiyoy lahaa,yeeyan baylihine.
Barbar uga du' waataan lahaa,buurta yey korine
Waataan banuu diid lahaa, yeeyan baalidine
Waataan bad kuma caymatee,soo barrooy idhiye .
Boholyowga Hawd bay durduro,budulka raacdaaye
Ballishiil kaliishay tagtaa, biliqda dayreede
Kobta ariga beeduhu degey,kor uga baaddaaye
Banka waa ka carartaa sidii,gan iyo buubale
Baqoolaa hadhkii bay sidii,badalli roortaye
Biciidkey ku darantaa sidii,bahal ugaareede
Bicil faraq ku yaal bay tiqiin,baariga u saare
Hareeriga ka baxay foocyadey,baaca gelisaaye
Sida geriga beryaha ah bay, bucusha laacdaaye
Bilbilaha mareedh caarley,baraqda daqdaaye
Barqamaaga geyraha baxay,balaga goysaaye
Caleen baacday tuurfaahistey,bulush cantuugtaaye
Bisiq hamasha buuniga dharjada,udug buuracowga
Burdad ubax leh baar iyo uneex,baqas ku fuuraaga .
Bunta waran barraajistey,balala qaadaaye
Bakadaha iyo xiitoolahay,banan u raacdaaye
Burca toon leh bacad ciidle bay,bara hoyaaddaaye
Intaasey ku baayiri,jirtoo baashi ku ahayde.
Baran mayso meeshaa degtaan,boqol Alluu-naarye
Bog qalluudan beer godani waa ba'iyo hooggeede
Ka soo bixiya waataan lahaa, baalcadii Gubane .
Jiilaal barraahsaday hadday,bila ku soo oonto
Badowlahada waataan lahaa, baara haw horine
Balxis geeya waataan lahaa, wey baduuxsamiye.
Bilcataabihii iga xadaan,uga baqaayaaye.
Waataan baatriteedii lahaa, buurka yay tebine
Hal ma bededo waataan lahaa, beeya-gurihiiye
Waataan ku iri hayga bixin,barqab baa dhalaye
Ka bariiya waataan lahaa,beydda yuu jarine.
Bushuma aan run lagu oran waa,lagu beloobaaye
Waataan bahdaa yay ku lumin,kuula baashiraye
Waataan bad baan kugula dhici,baane kuu iriye.
Bih-ina-faatax biixida jabtaan,baani kabihayne
Awel bay badaawidu galeen, bohol Walwaaleede
Macayeedna buufamehey,badaha raaceene.
Adigana baroor bay indhuhu,kula basaaseene
Bulxankeeda olol ba ka roon,adiyo beeggaaye
Haddaad haatan biixida wadheen,bag iyo haankiinna.
Nimanyahow dabuub gabay baryahan uma dadaalayne
Wax idaaray mooyee xalaa laygu soo dagaye